Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Warshadaha | Shiinaha Warshadaha Warshadaha
Naqshadaynta foornada wareega
Graphite waxaa loo isticmaali karaa in lagu shaabadeeyo oo lagu nadiifiyo walxaha, waxaana si weyn loogu isticmaalaa meelo badan oo sibidh ah oo wareega ah. Waxay leedahay labo ujeedo oo waaweyn: mid waxaa loo isticmaalaa in lagu xirto madaxa kiliyaha iyo dabada foornada, midna waxaa loo isticmaalaa saliidaynta inta u dhaxeysa giraanta iyo suunka giraangirta. Waxyaabaha garaafka ee loo adeegsaday labaduba waa qaab dhismeedka dhismaha.
Baalale garaafka laydhka / garaafka garaafka
Baffles Graphite leeyihiin conductivity koronto wanaagsan, caabbinta heerkulka sare, acid iyo iska caabin alkali, iska caabin ah daxalka iyo si fudud loo farsameeyo.
Warqad / Sawir / Sawir Sawir gacmeed
Waraaqda garaafka ah ee loo yaqaan 'synthetic paper graphite', filim garaafaf ah oo dabiici ah, xaashida garaafka ee heerkulka sare u adkaysta, kuleylka badan iyo filimka korantada ku shaqeeya
Flake budada garaafka
Budada dabiiciga ah ee garaafka dufanku waa garaaf dabiici ah, oo ku jira qaabka kalluunka fosfooraska Waxay ka tirsan tahay nidaamka muraayadda laba geesoodka ah ee qaab dhismeedka lakab leh. Waxay leedahay sifooyin wanaagsan oo ah caabbinta heerkulka sare, habsami u socodka korantada, kuleylka kuleylka, saliidaynta, baaxadda, aashitada iyo caabbinta alkali.
Gawaarida garaafka garaafka
Badeecadu waxay leedahay saliido wanaagsan, xoog sare, iska caabin heerkul wanaagsan oo heerkul sarreeya, caabbinta heerkulka sare, caabbinta daxalka, iska caabinta qiiqa oo xoog leh, wasakhda oo hooseysa, nolosha adeegga dheer, iyo waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha fiber galaas.
Kubad Nadiif ah oo Nadiif ah
Kubadda Nadiifinta Sare ee Graphite guud ahaan waxaa loo isticmaalaa aagagga sifaynta heerkulka sare, sifaynta adag, qufulka firfircoon, boodhka foornada, iwm. codsi, sidaa darteed garaafka cadaadiska isostatic ama garaafka qaabeysan waxaa asal ahaan loo xushay inuu yahay alaabta ceyriin ee kubadaha garaafka.
Shaxda saliidaynta Graphite / Bar / Bar Graphite Lubricant Bar
Sababtoo ah astaamaha qaabdhismeedkeeda, waa saliid adag. Usha yar ee is-saliidaynaysa ee ka samaysan garaaf adag iyo hufnaan sare ayaa ku habboon biraha isdabamarin ee aan saliida lahayn, taarikada is-saliidaynta, isdabamarin iskeed u socota, iwm. keydinta qalabka shidaalka, waxay had iyo jeer ahaayeen kuwo aan looga maarmin horumarinta militariga iyo warshadaha casriga ah iyo tikniyoolajiyad sare oo cusub. Usha yar ee loo yaqaan 'Graphite rod rod' waa mid ka mid ah waxyaabaha loo yaqaan 'graphite' ee loogu talagalay codsiyada warshadaha, waxay si weyn u yareysaa dayactirka farsamada, kharashka shidaalka, iyadoo lagu guuleystay ujeeddada labada saliid iyo kuwa ka shaqeeya saliidda aan saliidda ahayn.
Qaabka impirate graphite waa mid toosan, kaas oo yareyn kara iska caabinta markuu meertada yahay, khilaafka iyo aafada udhaxeysa dareeraha iyo dareeraha biraha ayaa yar. Sidaa awgeed, heerka degassing-ka ayaa ka badan 50%, waqtiga dheecaanka ayaa la gaagaabayaa qiimaha waxsoosaarkana waa la dhimay.
Gacanta garaafka / garaafka shaft garaafka
Waxyaabaha loo yaqaan 'Graphite' laftiisa ayaa leh waxqabadka saliidaynta, taas oo lagu go'aaminayo qaabdhismeedka madadaalada ee garaafka. Saliidda garaafku waxay u sabab tahay saliidda wanaagsan ee biyaha iyo hawada, marka lagu daro qaab-dhismeedka dabiiciga ah ee shabagga.
Mashiinka garaafka ee bamka faakiyuumka
Daab Graphite, sidoo kale loo yaqaan slide, daab, xoq, saxanka kaarboon, sheet kaarboonka la safeeyey, ayaa si wadajir ah loogu yeeri karaa sida daab. Waxay ka samaysan tahay walxo kaarboon graphite, waara, oo ku habboon warshadaha daabacaadda, PCB, khariidad, sawir koronto iyo warshado kale.
Xirxirida xirmooyinka garaafka
Xidhmada garaafka ee la xoojiyay waxay ka samaysan yihiin silig garaaf garaysan oo balaadhinaya oo lagu xoojiyay fiber galaaska, silig naxaas ah, silig bir birta ah, silig nikkel ah, silig alumis causticum nickel ah, iwm. Waxay leedahay astaamo kala duwan oo garaafka la ballaadhiyay ah, waxayna leedahay adduunyo xoog leh, jilicsanaan wanaagsan iyo sare xoog. Lagu daro xirmada guud ee tidcan, waa cunsurka ugu waxtarka badan ee wax lagu xalliyo dhibaatada heer kulka heerkulka sare iyo qufulka cadaadiska badan.